Ny lahatsoratr'i Ohad Samet momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ohad Samet
Ohad Samet no mpiara-manorina sy CEO an'ny TrueAccord, ilay sehatra fanarenana algorithmika voalohany. TrueAccord dia mampiasa ny fianarana milina, famakafakana fitondran-tena ary fomba fiasa mahaolona hanampiana ireo orinasa sy orinasa madinidinika hamerina ny fandoavam-bola be dia be ary hitazonana ny fifandraisan'ny mpanjifa tsara.
Sabotsy, Janoary 19, 2019 Sabotsy, Janoary 19, 2019 Ohad Samet
Ny fatiantoka mifototra amin'ny fifanakalozana dia zava-misy eo amin'ny fiainana ho an'ny orinasa maro, noho ny chargebacks, faktiora tsy voaloa, fivadihana, na vokatra tsy miverina. Tsy toy ny fampindramam-bola izay mila manaiky ampaham-bola be dia be ho toy ny maodelin'ny orinasan-dry zareo, maro ny fanombohana no mihevitra ny fahaverezan'ny fifanakalozana ho toy ny fanelingelenana tsy mila fitandremana. Izany dia mety hiteraka fitomboan'ny fatiantoka noho ny fihetsiky ny mpanjifa tsy voamarina, ary ny fihemoran'ny fatiantoka izay azo ahena be amin'ny vitsivitsy